50,000,000 Kaadị Azụmaahịa! | Martech Zone
Monday, October 19, 2009 Tọzdee, Febụwarị 25, 2021 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’inwebeghị ohere ịlele minicards Moo ama ama, ha bụ n’ezie ọgwụgwọ! Casey si MooshinIndy.com nwere ihe edere edere ya na foto ya di egwu ma ha di egwu.
Emere ha site na ezigbo ngwaahịa ma jide gị anya. N'ezie, ha ereela ihe karịrị 50 kaadị azụmahịa si Moo ma nyefee ha ihe karịrị mba 150!
Moo na-agbakwunye ụfọdụ nhọrọ:
Abụọ kwadoro oyiyi na-ebugote - na-etinye ngwa ngwa ụlọ ọrụ, akara ngosi, na aghụghọ dị iche iche n'ihu na azụ nke MiniCards, na-agbasawanye ohere nke ihe ngwaahịa a nwere ike iji. Iji maa atụ, Perch, ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọdịnaya dị na ntanetị, ebipụtala koodu nkwalite pụrụ iche na nke ọ bụla n'ime MiniCards ya, na-eme ka ha bụrụ ngwa ahịa ahịa dị egwu.
Nhọrọ nhazi mbu - Ihe ndebiri, ederede, na agba ndị ọzọ na-enye ndị ahịa nhọrọ ndị ọzọ maka imepụta kaadị ha, na-ewere ahazi nke MOO na ọkwa ọhụrụ.
Ọnụ ego - Site na mkpọ 400 ọhụrụ, obere azụmaahịa nwere ike zụta n'ọtụtụ dị ukwuu iji gboo mkpa ha ịkparịta ụka n'andntanet ma nata nnukwu ego.
Ekwenyesiri m ike na kaadị azụmahịa ekwesịghị ịbụ ihe efu na imepụta ọnụ ala nke ahụ na-ebugharị ngwa ngwa ozugbo ị laghachiri n'ọfịs ma tinye ama ahụ LinkedIn. Jiri oge ọ bụla ị gafere na kaadị gaa na atụmanya gị ọzọ iji mee ka ị nwee echiche pụrụ iche. MOO kaadị azụmahịa - $ 21.99 maka 50 pụrụ iche, ahaziri azụmaahịa ahaziri iche, nke ọ bụla nwere ụdị dị iche.
Kaadị azụmahịa nke m zụtara n'oge na-adịbeghị anya emeela nnukwu mkpọtụ - ana m aza ajụjụ oge ọ bụla m kesara ha. Karịsịa, agbanyeghị, ana m enweta azịza!
Tags: kaadị kaadị azụmahịakaadị azụmahịamoomoo kaadị
Alterian guzobere Social Media Marketing Council